Abantu kunye naMashishini amancinci-Abasebenzi abazizigidi
Abantu kunye namashishini amancinci
Singumbutho wabanikezeli beenkonzo zamanye amazwe kubantu / kubantu / kumashishini nakwiintsapho ezifuna ingcebiso kunye nokubonisana ngemicimbi efana nokuFuduka, imfundo, ukusekwa kweShishini, iiNkonzo zeNgqesho, ukuBekwa kwaMazwe ngaMazwe, iiNkonzo zezoMthetho, uNcedo lweVisa, ukuCebisa ngezezimali, ukuCebisa ngeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba. Uqulunqo lweNkampani yeHlabathi, Ukuvula iAkhawunti yeBhanki yeHlabathi, Ukusebenza nzima ngenxa yeAkhawunti, Ubhaliso lweeHlobo zokuthengisa, isisombululo seHR esigciniweyo, iOfisi yeVenkile, Iphepha-mvume lomsebenzi, Inkqubo yokufuduka kwabatyalomali, isisombululo sokusebenza, ukuxhotyiswa kwezixhobo, ukuqinisekiswa kweshishini, ukucebisa umsebenzi ngezamashishini , Ukukhuthala nokuThobela.
Sidala amathuba okuba abantu kunye neeNkampani bazenzele ubomi babo.
Sihlala siya kuba ngumcebisi wakho othembekileyo ngexesha elide ekubambeni.
Ngamava ethu amakhulu kunye neenkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa yinkampani yethu, sinceda abanini bamashishini abazimeleyo kunye neentsapho zabo ukuba benze inkampani kunye nokuseka ishishini elitsha, bandise, bakhule kwaye bagcine amashishini abo, sikulungele ukukukhokela kwindlela eya impumelelo. Nokuba unomdla kwi-M & A, fuduka, ujonge ukukhuphela i-minutia eofisini, ukhangela imali eyinkunzi okanye iqabane eliliqhinga okanye ujonge isicwangciso sokulandelelana kwesizukulwana sakho. Incinci loo nto ngathi.
Ngamava ethu amakhulu, ubungcali kunye neenkonzo ezininzi ezibonelelwe ngumbutho wethu kunye nenkampani, besinceda kwaye siququzelela abanini bamashishini, iinkampani kunye neendawo zokuhlala, kunye neentsapho zabo ukubandakanya inkampani kunye nokuseta amashishini amatsha, ukwandisa, ukukhula kunye nokugcina amashishini abo okanye ufuna umsebenzi, sikulunge kakhulu ukukukhokela kwindlela eya empumelelweni.
Nokuba unomdla kwi-Merger kunye nokuFumana, ukufudukela kwenye indawo, ukufuna ukulayisha ngasemva imisebenzi e-ofisini kunye neenkqubo, ukuzama ukufumana imali okanye iqabane lobuchule okanye ujonge isicwangciso sakho sokulandela isizukulwana esilandelayo, okanye ujonge ukucebisa ngezindlu okanye iinkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe okanye imfundo kwelinye ilizwe okanye i-IT. Iinkonzo esinokukunceda kuzo zonke iinkonzo njengoko zikhankanyiwe.
Izisombululo zethu zokuyila zibandakanya:
Iingcebiso zokufuduka ngokufudukayo kunye nenkxaso.
Isicwangciso esenziwe ngomsila kunye neengcebiso.
Ukuchaza amaxesha abekiweyo kuyo yonke inkqubo.
Inkqubo yokuqulunqwa kwenkampani yenziwe yalula.
Nika umfanekiso ocacileyo weendleko ezongeziweyo, akukho zothuso zifihliweyo.
Uncedo lokuvula iAkhawunti yeBhanki engumbandela onobuchule kulo naliphi na ilizwe elitsha.
Ukudityaniswa kunye nokufumana amathuba.
Amathuba okugcina umthwalo ungasebenzi
Iinkonzo ze-IT, njenge, Iwebhusayithi okanye indawo ye-Ecommerce
Izabelo zezabelo kunye nezivumelwano zamalungu
Ukuthengiswa kwezindlu kunye nezivumelwano zokuqeshisa
Uyilo lweekhontrakthi kunye nezivumelwano
Imigaqo-nkqubo yokusebenza ehambelana nomthetho kunye neencwadana ezinemisebenzi
Sisebenza kunye nawe ekuchazeni isicwangciso esinceda ukunceda amandla / iimeko / ukubanakho kwakho kwemali ukufezekisa iinjongo kunye neminqweno yakho. Ekugqibeleni injongo yethu kukuqinisekisa ukuba sibonelela ngohlobo lwenkonzo olusebenzela wena, usapho lwakho kunye nombutho wakho, siyafumaneka ukuze sisebenze umntu ngamnye, ngobuqu nangefowuni, skype, viber, whatsapp, naphi na Indlela yonxibelelwano ikulungele.
Isiseko somsebenzi wethu silala ekwenziweni ngokungaguqukiyo ekwenzeni oko kulungele abaxumi bethu.
Siyazingca ngokusika ekuntsokotheni, sisindisa onke amaqela axabisekileyo kunye nexesha.